Naanneessaa Galmeewwan Hundaataaf
Galme hundaataa keessaa, Naannessaa mul'annoo baramoo fi mul'annoo hundataa gidduu jijjiiruu ni dandeessa.
Naanneessaa qaamolee ijoo galmee hundataa tarreessa. Yoo qarree hantuuttee gubbaa maqaa galmee xiqqaa tarree keessatti haara galfachiitu, xurree guutuun galmee xiqqaa agarsiifameera.
Mul'annoo hundataa Naanneessa keessaa sajoowwan armaan gadii agarsiisa:
Mul'annoo hundataa fi mul'annoo baratamoo gidduu jijjiira.
Qabeentota qaama filatamani kan tarree Naanneessaa keessaa gulaalii. Filannoo yoo faayilii ta'e, faayilichi gulaaliidhaaf banama. Filannoon yoo kasaa ta'e, qaaqni kasaa ni banama.
Qabeentota haaromsuu barbaadde cuqaasuun fili.
Qabeentota filannoo haaromsa.
Kasaawwan mara haaromsa.
Kornyoowwan mara filannoo haaromsa.
Qabeentota mara haaromsa.
Ajajni kun kan argamu faayilii Naanneessaa keessaa mirga-cuqaasuudhaani. Amaloota kornyoo faayilii filatameef jijjira.
Faayilii fi kasaa ykn galmee haaraa galmee hundataa keessaa saaga.
Akkasumas faaayiloota galmee hundataa keessaa faayilii harkisuudhaan minjaala'aa kee irraa fi Naanessa mul'annoo hundataa irratti kaa'uudhaan
Kasaa ykn qabeentaa galmee hundataa saaga.
Faayiloota jiraatoo tokko ykn isaa ol galmee hundataa keessatti saaga.
Galmee xiqqoo uumaa saaga. Yeroo galmee haaraa uumtu, maqaa faaylii fi iddoo galmee itti olkaa'uu baraadde galchuu ni kakaata.
Qabeentootas Haalan Olkaa'i
Filannoo tarree Naanneessaa irraa haqa.
Title is: Naanneessaa Galmeewwan Hundaataaf